Uru - Shijiazhuang damei kingmech mgbapụta Co., Ltd.
Magnetik Drive mgbapụta
Mmiri dị ọcha
Ndị ọkachamara na ndị injinia
Dị ka onye na-ebubata ngwa ngwa mgbapụta, ụlọ ọrụ anyị agbaala ọtụtụ asambodo ụlọ ọrụ mmepụta ihe dịka isi ihe ndị a:
N'ime ụlọ ọrụ na-agbapụta mgbapụta, ụlọ ọrụ anyị eguzorola ndị ogbo ya maka ebumnuche ndị a:
1. Ego na-erughi ala na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya
Emi odude ke ehiwe nke Chinese mgbapụta n'ichepụta ụlọ ọrụ, Shijiazhuang obodo, anyị ụlọ ọrụ eguzobewo a ọkachamara slurry osisi. Ebe ọ bụ na ihe maka mgbapụta nkeji, nchara na-enwe ọnụ ala ebe a, ọnụahịa anyị na-ebelata belatara nke ukwuu. Ọ bụ ya mere na anyị nwere ike inye nfuli a pụrụ ịdabere na ya na ọnụahịa ndị ezi uche dị na ya. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ anyị na-emepụta mmanụ ọkụ na-eme na Dalian ma enwere ọtụtụ ndị ọrụ aka ọrụ na ọkachamara.
2. A pụrụ ịdabere na Ọdịmma Dị Mma
Dịka onye na-emepụta akụrụngwa mgbapụta, anyị na-arapara n'ụkpụrụ nke teknụzụ na ogo ọ bụla. Niile nfuli e mere na-arụpụtara na mba elu usoro na akụrụngwa. N'otu oge, anyị na-enye kachasị ngwaahịa nke e mere dị ka na-agbanwe agbanwe chọrọ nke ndị ahịa anyị. Anyị na-ekwe nkwa na mgbapụta ọ bụla anyị nyere gị na-enweta ọmarịcha ịdị mma yana arụmọrụ dabara adaba.
3. Njikwa Ogo
Iji jide n'aka na anyị pumping nkeji nyere gị n'ụzọ zuru okè na-egbo gị chọrọ, anyị ike a systemic na nlezianya àgwà akara usoro. Anyị nwere ike ịnye ngwaahịa ndị enyerela akara CE, ụkpụrụ ISO9001 ma ọ bụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere ike ịnye ndekọ njikwa njikwa yana akụkọ metụtara gị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, dịka "akụkọ gbasara anụ ahụ na kemịkal nke akụrụngwa maka isi ihe mgbapụta", "akụkọ rotor balancing", "akụkọ nyocha hydrostatic" na "nyocha nyocha mbu . Na mkpokọta, anyị na-ewere njikọ ọ bụla nke njikwa njikwa dị oke egwu, na-ekwenye na ngalaba ọ bụla na-agbapụta iji nwee ọmarịcha ịdị mma yana arụmọrụ dabara adaba.